Outdoor ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ - China Outdoor Factory
စက်ရုံလက်ကားအရောင်းအ ၀ ယ်လူစီးဖိနပ်၊ ရောင်းအားပူသောဖိနပ်အသစ်များ၊ အားကစားဖိနပ်များ
အဆိုပါတောင်တက်ဖိနပ်အတွက်လမ်းကြောင်းအပေါ်တစ် ဦး ပျော်စရာ - ဖြည့်နေ့အဘို့တက်ပြင်ဆင်ပါ! Faux သားရေနှင့်ကွက်လပ်အထက်။ ဇာ -up, ပိတ်သိမ်း။ အကာအကွယ်ရော်ဘာခြေချောင်း ဦး ထုပ်။ ဖနောင့်ဆွဲကွင်းဆက်။ လျှာနှင့်ကော်လာ။ ရှူရှိုက်လွယ်သောကွက်နံရံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရှူးဖိနပ်ဖြစ်သည်။ EVA midsole သည်တည်ငြိမ်သောသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ရာဘာ outsole သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုထုတ်ပေးသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်အပိုဒ်အမှတ် ၅၀၅၃ ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဂန္ထဝင်ဒီဇိုင်းစက်ရုံပူလက္ကားယောက်ျား၏တောင်တက်ဖိနပ်အထက်ပစ္စည်း - ဒြပ်ထည်၊ အသား၊ အသား၊
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပေါ်ဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်ခြေကျင်ခရီးသွားခြင်းဖိနပ်၏အလွန်မြင့်မားသော outsole ဆုပ်ကိုင်မှုကြောင့်ရာသီဥတုဆိုးဝါးခြင်းသည်သင်၏တောင်တက်အစီအစဉ်များကိုဘယ်တော့မှနှေးကွေးစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆင်ပြေမိုဘိုင်းအတွက်နိမ့်ပရိုဖိုင်းကိုတောင်တက်ဖိနပ်။ ဒြပ်ထပ်နှင့်အတူတာရှည်ခံပိတ်ထားသောကွက်အထက်။ ပွန်းပဲ့ကာကွယ်မှုအတွက်ဒြပ်ခြေချောင်း ဦး ထုပ်နှင့်ဖနောင့်။ တစ် ဦး ဦး စားပေးမထိုက်မတန်များအတွက်ရိုးရာဇာ -Up စတိုင်။ ထပ်ဆောင်းအတွင်းပိုင်းသက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်အသက်ရှူနိုင်သောအထည်အလိပ်နံရံ။ ကြာရှည်ခံသောသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကူရှင်များနှင့်စွမ်းအင်မြင့်မားခြင်းတို့အတွက်ပေါ့ပါးသော midsole ဖြစ်သည်။ L ...
အသစ်ဒီဇိုင်းလမ်းလျှောက်အထည်အလိပ် Sneaker လူတို့အဘို့အသက်ရှူနိုင်သောဖက်ရှင်တောင်တက်ဖိနပ်
တောင်တက်ဖိနပ်များသည်သင်ခြေရာခံလျက်တစ်နေ့လုံးခြေထောက်ပေါ်တွင်မြဲမြံစွာယုံကြည်မှုရှိစေပြီးထိုလမ်းကြောင်းများကိုဆက်လျှောက်လှမ်းနေမည်။ ပေါ့ပါးသောတောင်တက်ဖိနပ်များကိုထည်နှင့်အမိုးနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အသက်ရှူနိုင်သော ၀ တ်စုံအတွက်အထည်အလိပ်။ dual-သိပ်သည်းချုံ့ပုံသွင်း EVA midsole ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောနှင့်ထောက်ခံမှုများအတွက်ပိုမိုချုံ့ခုခံပေးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေကုန်နှစ်သိမ့်မှုအတွက်ခန္ဓာဗေဒမြင့်မားသောခုန်ထွက်နိုင်သည့်ခြေထောက်ဖြစ်သည်။ အထူးရော်ဘာများက grippy traction ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များပုဒ်မနံပါတ် .: 5051 Pro ...
New Arrival US 12 နွေ ဦး ရာသီတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ Breathable Outdoor Shoes
သင်၏စွန့်စားသူကိုတောင်ပေါ်သို့အောက်သို့ဆင်းစေပြီးစိတ်ချရသောတောင်တက်ဖိနပ်ဖြင့်ကာကွယ်ပါ။ တည်ငြိမ်ပြီးအလယ်အလတ်တန်းစားတောင်တက်ဖိနပ်ကိုအသက်ရှူနိုင်သောကွက်ကွက်များနှင့်တာရှည်ခံသောဒြပ်ထပ်အထပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကြံ့ခိုင်သော rounded toe ပုံစံသည်ဇာချည်ပိတ်ထားသောပျော့ပျောင်းသောကော်လာ၊ ဆွဲအားဖြင့်ဒေါက်ဖိနပ်နှင့်အကာအကွယ်ဖနောင့် tab တို့ပါရှိသည်။ အကောင်းဆုံးသောဆွဲဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းရန်အတွက်အကာအကွယ်ပေးထားသော EVA ခြေစွပ်နှင့်ဘက်စုံသုံးရော်ဘာအစိုများကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပုဒ်မနံပါတ် .: ၅၀၅၀ ကုန်ပစ္စည်းအမည် - အလယ်အလတ်ပိုင်းဖြတ်တောင်တက်အများဆုံးလူကြိုက်များသည့်အပြင်ဘက်ဖိနပ် ...
ဘွတ်ဖိနပ်သည်သင်၏လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းအကာအကွယ်သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်ကြာရှည်ခံသောအစွန်အဖျားချုပ်ကိုင်ထားခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုလုံခြုံစေသည်။ ဖုံးကွယ်ထားသောနိုင်လွန်ကွက်နှင့်ဒြပ် pu အထက်။ အဆင့်မြင့်ဘွတ်ဖိနပ်သည်ခြေကျင်းကာကွယ်မှုကိုထပ်မံပေးသည်။ ထပ်ဆောင်းအတွင်းပိုင်းသက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်အသက်ရှူနိုင်သောအထည်အလိပ်နံရံ။ ပိုမိုလုံခြုံသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ရိုးရာဇာစနစ်။ ပေါ့ပါး။ ကြာရှည်ခံနိုင်သောချိတ်ဖင့်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။ High-rebound midsole သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော shock shock စုပ်ယူမှုနှင့်သင်၏ခြေထောက်ကို ...
အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် 2020 Classic Outdoor Mesh Breathable တောင်တက်အားကစားဖိနပ်
ရှူးဖိနပ်သည်ပေါ့ပါးပြီးအကြမ်းခံသောအပေါ်ဘက်ရှိသတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်မြေအနေအထားအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ နိမ့်နိမ့်ပရိုဖိုင်းကို - တောင်တက်ဖိနပ်တစ်ခုစွမ်းဆောင်ရည်ကွက်အထက်၏လုပ်။ လျင်မြန်စွာချိန်ညှိနိုင်မှုနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောအံဝင်ခွင်ကျမှုအတွက်ဇာထည်ပိတ်ပစ်ခြင်း။ အကာအကွယ်ခြေချောင်း ဦး ထုပ်။ ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ထိတ်လန့်မှုကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက် Single-သိပ်သည်းဆ EVA midsole ။ ရော်ဘာ outsole သည်ကြာရှည်ခံသောစွမ်းအားကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပုဒ်မအမှတ် ၅၀၅၂ ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဖက်ရှင်အရောင်နှင့်အပြင်ပန်းဖိနပ်ပါ ၀ င်သည်။
အမေဇုံ Hot Deals ဖိနပ်အပြေးပြိုင်ဘက်အမျိုးသားများ၏အပြင်ဘက်ဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူ
အဆိုပါတောင်တက်ဖိနပ်သည်၎င်း၏ရာသီဥတုအဆင်သင့်ဆောက်လုပ်ရေး, ခြေထောက်ထောက်ခံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောချုပ်ကိုင်ထားနှင့်အတူလမ်းကြောင်းအပေါ်အချိန်တိုင်း၌ပျော်မွေ့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အထက်တန်းလွှာသားရေနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း။ လျှာနှင့်ကော်လာ။ ကျောက်တုံးများနှင့်လမ်းကြောင်းအပျက်အစီးများမှအကာအကွယ်ခြေချောင်းအဖုံး။ ရိုးရှင်းသောဇာ -Up စနစ်လုံခြုံစိတ်ချရသောအတွက်။ ဖနောင့်ဆွဲ tab ကို။ Breathable ကွက်နံရံ။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောအတွင်းခံအသွင်ပြင်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောပံ့ပိုးမှုနှင့်ခြေထောက်သက်သောင့်သက်သာရှိစေသည်။ တည်ငြိမ်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်ဖိအားပေးသည့် EVA midsole ။ GRIP outsole သည်ကြာရှည်ခံသော ...